Ngenxa ezincwadini zomlando, abaningi bethu bayawazi abantu abadumile kuyo yonke le minyaka, ezifana ojenene omkhulu, osopolitiki kanye nososayensi. Kodwa, ngeshwa, esikoleni kuphela inikeza kancane encane ulwazi labo izibalo, okwenziwa ngokusebenzisa ukuphila kwakhe ngokuhlakanipha nomusa, futhi ukhunjulwa the namaqiniso angokomlando.
Ukunikeza ukukulungisa futhi ufunde mayelana indoda enkulu ngempela ukuthi abantu abangcwele futhi churched eyaziwa ngokuthi i-St Epiphanius the Hlakaniphile (isithombe nekanonizirovannykh St, ngeshwa, alikho ngemva kweminyaka eminingi kangaka). Yena - nombhali imibhalo oluchaza mayelana nabantu abavelele besikhathi sakhe, waba nengxenye indaba izenzakalo ezibalulekile kwenkathi futhi kungenzeka abe nethonya elikhulu emphakathini okusezingeni eliphezulu. Life of Epiphanius Ohlakaniphile, sifinyeto imisebenzi yakhe tetemibhalo, owasinda ngokuyisimangaliso namuhla, zichazwe lesi sihloko.
Ayikho usuku lokuzalwa
Akwaziwa uma wazalwa ngo Epiphany the Hlakaniphile. Biography Monk has ulwazi olwanele ubala futhi ngezinye izikhathi olungalungile: IsAm Epiphanius wayehlala engxenyeni ngekhulu le-14 yesibili, ngakho-ke, akumangalisi ukuthi ngemva kwamakhulu amaningi kangaka eminyaka ngemva kokufa kwakhe, lo muntu umneyshem babe ulwazi oluncane. Kodwa namanje zikhona imvuthuluka eqoqwe amaqiniso kusukela izingcezu disparate tente indaba ethile empilweni Epiphany indela.
Umbono okwandile ukuthi ukuphila Epiphanius the Hlakaniphile kwaqala ngo Rostov. Indlela yakhe engokomoya Epiphany owayesemusha waqala ezweni lakubo, e lezindela eSt Grigoriya Bogoslova, isici okuyinto kwaba ukuthi kwakukhona amasevisi izilimi ezimbili. Isonto lwamaSlav nesiGreki.
Ngaphezu izilimi ezimbili noma ukuchema kuzo sezindela idume ngomtapo wayo wezincwadi omangalisayo oqukethe izincwadi eziningi ezinkulu abhalwe ngezilimi ezahlukene. Ingqondo enelukuluku nasekomeni olungevinjwe ulwazi imfundamakhwela ezikhuthele kwaholela eqinisweni ukuthi sichitha amahora angaphezu kwezigidi amaphepha, bafunde izilimi ezahlukene, kanye chronographs, Ladder, imibhalo waseBhayibhelini, izincwadi zomlando zaseByzantium lasendulo.
A indima enkulu ekwakhiweni Epiphany kudlalwa ubuhlobo obuseduze Stefan Perm - saint esizayo, ababekhonza ngasemnyango sezindela efanayo. Erudition kanye nomqondo ovulekile - esinye sezizathu kungani Epiphany iye okuthiwa Hlakaniphile.
Ngaphandle amabhuku Epiphany wahosha ulwazi ekuhambeni kwakhe. Kunobufakazi bokuthi monk eziningi ukuhamba emhlabeni wonke: wayengumuntu eConstantinople, waya eNtabeni Athos eJerusalema, futhi ngokuvamile abantu beza eMoscow nakwamanye amadolobha Russian kanye nasezindaweni zasemakhaya. Ubufakazi travel eJerusalema iwumsebenzi "Tales Epiphany Mnich endleleni eya emzini ongcwele waseJerusalema. ' Ngokusobala, lwati lolutfolakele kusukela indela kule mikhankaso, abangaba njengoba impendulo yombuzo kungani Epiphany iye okuthiwa Hlakaniphile.
Gramotnik zintathu Monastery
Lapho beqeda ukuqeqeshwa lezindela eSt Georgiya Bogoslova Life of Epiphanius the Hlakaniphile kwaqhubeka eMoscow. Ngo 1380, yena idluliselwe zintathu sezindela waya atehlukanisa abadumile eRussia - St uSergiyu ka Radonezh - osafunda. Kulesi sezindela wayethethelela efakwe ohlwini Epiphany gramotnikom futhi wahola imisebenzi knigopisatelskuyu asebenzayo. Ubufakazi balokhu Iqiniso liwukuthi inqwaba zemibhalo yesandla ku Sergiev-zintathu Lavra elotshiwe nguye "Stihirar" nezinye izithasiselo eziningi namanothi igama lakhe.
Ngo 1392, ngemva kokufa umeluleki wakhe futhi ongokomoya Sergiya Radonezhskogo, Life of Epiphanius the Hlakaniphile kungokoqobo izinguquko eziphawulekayo: edlulisela eMoscow ngaphansi kobuholi Metropolitan Cyprian, lapho ahlangana khona nomculi Theophanes esiGrekini, kamuva kube azoyibopha ubungani eside. Umdwebi kanye nomsebenzi wakhe ekhiqizwa ngesikhathi indela njengoba ekugxiliseni futhi kuholele injabulo enjalo engachazeki ukuthi Epiphany futhi yayisiqale ukupenda.
IZwi Stefan Perm
Entwasahlobo ka-1396 washona blagopriyatel indela-Umlobi womlando Bishop Stefan Permsky. Futhi emva kwesikhashana ngokweqile ukutshela umhlaba mayelana izenzo St Epiphanius the Hlakaniphile wabhala "The Life of Stefano Perm." Lo msebenzi - hhayi Biography enemininingwane, futhi isonto bendabuko kanye nencazelo ezifundisayo zonke izibusiso yombhishobhi Perm: Epiphany igubha uStefanu ngamatshe njengoba saint, owadala Perm zamagama, abahlome abeZizwe ukholo lobuKristu, izithombe sephulwe kanye eyakhelwe obuKristu emazweni le Komi abantu.
Izenzo kukaStefanu lasePerm ku Epiphany ensimini Christian lilinganisa nezenzakalo ezingokomlando, ngoba ngaphezu kakhulu izinga kwezincwadi "The Life of Stefan lasePerm - lena umthombo zomlando olukhulu, ngoba ngaphandle ubuntu uStefanu Bishop liqukethe amaqiniso, lihamba exhunywe ne ethnography, isiko nomlando endulo izenzakalo ezenzeka Perm, ubudlelwane bayo ne eMoscow futhi isimo sezombangazwe e jikelele. Kuvele kungemalengiso futsi ukuthi azikho izimangaliso kule umsebenzi wokubhala.
Abaphila Besikhathi nzima ukufunda imisebenzi Epiphanius the Hlakaniphile inikezwe. Nazi amagama ambalwa ngokuvamile ekhona yezinganekwane Epiphany:
Yiba DRC ekuqaleni Ruthenian;
Njengoba isikhathi sihamba, indaba umsebenzi, ikhono kahle izwi indela walidumisa pundits. Lena esinye isizathu esenza Epiphany iye okuthiwa Hlakaniphile.
Indiza eya Tver
Ngo 1408, kepha wesabeka kwenzeka: ku Moscow wawa sesisanganiswa impi enonya Yedigei Khan nebutho lakhe. The Life of Epiphanius abesaba uNkulunkulu the Hlakaniphile kwenza ube esejika: a knigopisets nesizotha ugijima Tver, ungakhohlwa ukuthatha imisebenzi yabo. Ngo Tver Epiphany uvikelekile Archimandrite koMsindisi Monastery Afanasyeva Cornelius (emhlabeni - UCyril).
Monk Epiphanius wahlala Tver kakhulu ngendlela 6 ubudala, futhi eminyakeni abangane obuqinile uKorneliyu. It Epiphanius Archimandrite kutjelwa umsebenzi Feofana Greka, kakhulu kokuncoma ababezothweswa umsebenzi umculi. Epiphanius watshela uCyril ukuthi Theophane ipende kwase kunamasonto angaba 40 nezakhiwo eziningana eConstantinople, Cafe, Chalcedon, eMoscow Novgorod. Ezincwadini zakhe kuya Archimandrite Epiphany futhi kuzibiza isithonjana-umdwebi, okungukuthi, imifanekiso ncwadi, futhi uthi lolo imidwebo yakhe - kuyinto nje lokusungula ikhophi Feofana Greka.
Ngo 1414 Epiphanius the Hlakaniphile babuyela ezweni bomdabu - ukuba imfundiso kaZiqu-zintathu Monastery, ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi uZiqu-zintathu-uSergiyu (behlonipha Sergiya Radonezhskogo). Naphezu abasebenza Biography kukaStefanu lasePerm, kanye khona ukuqhubeka yebanga lokusuka Isigodlo ekhaya, Epiphany uyaqhubeka ukwenza irekhodi futhi ukubhala amaqiniso izenzo umeluleki wakhe Grigoriev Isigodlo, uqoqela omunye ulwazi lofakazi futhi imibono yabo siqu. Futhi 1418 wabhala Epiphanius the Hlakaniphile "Life Sergiya Radonezhskogo". Wafundelwa isikhathi eside iminyaka engu-20. Ukuze ngokushesha ngokubhala indela ayengenalo ulwazi kanye ... isibindi.
IZwi Sergii Radonezhskom
"The Life of Sergiya Radonezhskogo" - ngisho umsebenzi voluminous ezingaphezu kuka "IZwi Life nezimfundiso zethu oNgcwele uBaba uStefanu, umbhishobhi yangaphambili Perm." Yena ihlukile "Life of" lokuqala inala amaqiniso oluchaza nokuphila Sergiya Radonezhskogo, futhi ukulandelana eqonde kakhulu ngokulandelana kwazo zonke izenzakalo izenzakalo. isizathu esikhethekile sokuba kukhulunywe kufanele kuqoshwe a "Ukuphila" kuyinto elingokomlando eziphathelene nempi ye-Prince Dmitry Donskoy ne Tartar ibutho nesihluku Khan Mamai. It Sergiy Radonezhsky wabusisa isikhulu umkhankaso nenkani.
Bobabili "Ukuphila" - reflection on the Epiphany the Hlakaniphile bengazilawulela khona isigcino kuyinkimbinkimbi ngiswa abasemqoka abazizwa, imizwelo yabo nemizwa yabo. Ekuqhubeni Epiphany elihlale epithets eziyinkimbinkimbi, imishwana florid, bomcondvofana kanye allegories ahlukahlukene. Umbhali ngokwakhe umbiza isethulo sakhe imibono ngokuthi "cobwebs ngamazwi."
Nazi amazwi ezivame kakhulu Epiphanius Ohlakaniphile, othathwe "Life of Sergiya Radonezhskogo":
Yako priasta efanayo;
Mhlawumbe yindlela obungajwayelekile ukuba knigopisaniya kunikeza impendulo yombuzo othi kungani Epiphany iye okuthiwa Hlakaniphile.
Enye inguqulo owaziwa "The Life of Sergiya Radonezhskogo" esikhathini sethu lapho sibonga ukucutshungulwa Mount Athos indela Pachomius amaSerbia owayehlala ngoZiqu-zintathu-uSergiyu Monastery esikhathini kusuka 1440 by 1459. Layidalile inguqulo entsha "Izimpilo" emva St uSergiyu abagcotshwa. Pachomius le abangamaSerbia ushintshe isitayela usebenzisane nezinhlelo Epiphanius eyibhalela Hlakaniphile mayelana nokuthola izinsalela of uMfundisi futhi wachaza izimangaliso posthumous ka wadala phezu uSergiyu ka Radonezh.
Alukho usuku lokufa
Kanye usuku lokuzalwa ayaziwa Epiphanius Ohlakaniphile, engakaze osungulwe futhi usuku oluqondile sokufa kwakhe. emithonjeni ehlukene zithi knigopisets enyukela ezulwini nalesikhathi ephakathi kwengu-1418 futhi 1419. Inyanga elilinganiswayo ukuwa - Okthoba.
WuSuku Lokukhunjulwa Epiphany the Hlakaniphile - Juni 14. Kuze kube manje, yena engakaze abagcotshwa, esingavunyelwe abagcotshwa. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, kumane Kuxhomeke isikhathi ...
I-Internet Explorer kungaqali: 8 izindlela "sivuselele" isiphequluli
Visa eFinland - ingakwazi ukuthola izakhamuzi Russian
Polypropylene amapayipi Ukushisa: kanjani ukukhetha? Ukucaciswa, amanani